13 Sep 2017 . 5:30 PM
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဓါတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်တတ်တဲ့သူတစ်ဦးလို့ ယူဆပါသလား။ ဒီလိုမျိုးသူတွေအတွက် အပိုဝင် ငွေရှာဖို့ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ဖုန်းကင်မရာနဲ့ပဲဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့သူဆိုရင်တော့ ဝင်ငွေ ရှာဖို့မလုံလောက်သေးပါဘူး။ Digital ကင်မရာ ကောင်းကောင်းတစ်လုံးတော့လိုအပ်ပါဦးမယ်။ နောက်တစ်ချက် အနေနဲ့ ဖုန်းကင်မရာနဲ့ Digital ကင်မရာနဲ့က ရိုက်ရတာနည်းနည်းကွာခြားမှု ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဒိလိုကွာခြားမှု တွေကိုလည်း လေ့လာထားဖို့လိုပါမယ်။
အဲ့ဒီတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ဝင်ငွေမရှာခင် ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာ တစ်လုံးဝယ်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ ဒီလိုဝယ်ရမယ်ဆို လို့ ပိုက်ဆံအများကြီးကုန်မယ်လို့မထင်ပါနဲ့။ အနည်းဆုံးမြန်မာငွေ လေးငါးသိန်းလောက်ကနေစပြီး ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာတွေကို ဝယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဈေးကြီးကြီးကင်မရာအကောင်းစားကြီးနဲ့ရိုက်မှ ဓါတ်ပုံကောင်းကောင်းရ တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဈေးအလယ်အလတ်ကင်မရာနဲ့ရိုက်ရင်လည်း ဓါတ်ပုံကောင်းကောင်းထွက်ပါတယ်။ ကင်မရာ ထက်စာရင် ဓါတ်ပုံပညာမှာ ရိုက်တဲ့သူကပိုပြီးတော့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို အမြဲသတိရပါ။
ဖုန်းကင်မရာတွေက စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လာပြီဆိုပေမယ့် ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာတွေကိုတော့ မယှဉ်နိုင်သေးပါဘူး
ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာစဝယ်မယ်ဆိုတာနဲ့ ကြုံရမှာက ဘယ်လိုအမျိုးအစားဝယ်မှာလဲ။ Bridge လား၊ DSLR လား၊ Mirrorless လားဆိုပြီးတော့ စပြီးတော့ စဉ်းစားရပါမယ်။ ပြီးရင်ဘယ်တံဆိပ်ဝယ်ကိုင်သင့်လဲဆိုတာ ထပ်ပြီး တော့ စဉ်းပြီးတော့ စဉ်းစားရပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာ Cannon, Nikon, Sony, Panasonic နဲ့ Fuji ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တွေ ရှိပါတယ်။ Cannon ကတော့ Toyota ကားလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်များတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ပါ။
ဒီနေရာမှာ ကင်မရာ Review လုပ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကင်မရာတွေအကြောင်းကို သီးသန့်မပြောတော့ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ဈေးနှုန်းသုံးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကင်မရာမျိုးတွေဝယ်သင့်လဲဆိုတာပဲ ပြောသွားပါမယ်။ အခုမှစပြီး ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် DSLR အမျိုးအစားကို ရွေးဝယ်ပါလို့အကြံပေး ပါတယ်။ Mirrorless တွေက ပေါ့ပါးပေမယ့် ဈေးနှုန်းမြင့်မားပါတယ်။
DSLR အမျိုးအစားတွေထဲမှာဆိုရင် Nikon D3300, D3400 ၊ Cannon 1300D တို့က လေးသိန်းခွဲ၊ ငါးသိန်းနဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။ Tocuch Screen နဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၇ သိန်းခွဲ၊ ၈ သိန်းလောက်သုံးရပါမယ်။ နောက်ပြီး ကင်မရာဆိုတာက သူ့ချည်းပဲမပြီးသေးပါဘူး။ မှန်ဘီလူးဝယ်ဖို့ ကျန်ပါသေးတယ်။ Sony တော့၊ Fuji တို့က လည်းကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့က ဈေးနည်းနည်းများများပါတယ်။ ကိုယ်ကပိုက်ဆံသုံးနိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင် တော့ ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူနဲ့သာတိုင်ပင်ပြီး ဈေးကြီးကြီးကင်မရာအကောင်းစားတစ်လုံးသာ ဝယ်လိုက်ပါ။
ဒါကတော့ Digital ကင်မရာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိသေးတဲ့သူတွေကို နည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးတာပါ။ ကင်မရာဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ပိုက်ဆံစရရှာလို့ရပါပြီ။
Nikon D5600 DSLR ကင်မရာပုံပါ။
ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာရောင်းလို့ရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာတော့ ဒိလိုမျိုး Websites တွေ အများကြီးပါ။ Shutterstock နဲ့ Alamy တို့ကတော့ အွန်လိုင်းမှာ ဓါတ်ပုံရောင်းဝယ်နိုင်တဲ့ နာမည်ကြီး Websites တွေပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီလိုမျိုးဓါတ်ပုံရောင်းဝယ်နိုင်တဲ့ Website တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါ ကတော့ Flairs Eyes ပါ။ သူရဲ့ Websites လိပ်စာက www.flaireyes.com ဖြစ်ပါတယ်။
Flair Eyes Website ပုံ
သူ့ဆီကို ဓါတ်ပုံပို့ပြီးရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ စည်းကမ်းချက်တချို့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေက
– ရိုက်ကူးသူက အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်ရပါမယ်။
– မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေသာ ဖြစ်ရပါမယ်။
– DSLR (သို့) Mirrorless Camera နဲ့ ရိုက်ကူးရပါမယ်။
– ဓါတ်ပုံအရွယ်အစားက အလျား ၃,၀၀၀ x အနံ ၂,၀၀၀ Pixels (3,000 x 2,000 Pixels) အနည်းဆုံးရှိပါမယ်။
Resolutions အနေနဲ့ 300 (PPI) နဲ့ ဖိုင်ဆိုက်က အနည်းဆုံး 1 MB မှ3MB အတွင်း ရှိရပါမယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ သိချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ Facebook Page မှာ အသေးစိတ်ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Link >>> Flair Eyes Facebook Link
ဓါတ်ပုံတွေရောင်းဝယ်နိုင်တဲ့ Websites တွေအကြောင်းကိုလည်း နောက်အပတ်မှာ ရေးသားဖော်ပြပေးပါဦးမယ်။
ကိုယျ့ကိုယျကို ဓါတျပုံကောငျးကောငျးရိုကျတတျတဲ့သူတဈဦးလို့ ယူဆပါသလား။ ဒီလိုမြိုးသူတှအေတှကျ အပိုဝငျ ငှရှောဖို့ အခှငျ့အလမျးတဈခုရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျက ဖုနျးကငျမရာနဲ့ပဲဓါတျပုံရိုကျခဲ့တဲ့သူဆိုရငျတော့ ဝငျငှေ ရှာဖို့မလုံလောကျသေးပါဘူး။ Digital ကငျမရာ ကောငျးကောငျးတဈလုံးတော့လိုအပျပါဦးမယျ။ နောကျတဈခကျြ အနနေဲ့ ဖုနျးကငျမရာနဲ့ Digital ကငျမရာနဲ့က ရိုကျရတာနညျးနညျးကှာခွားမှု ရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီတော့ ဒိလိုကှာခွားမှု တှကေိုလညျး လလေ့ာထားဖို့လိုပါမယျ။
အဲ့ဒီတော့ ဓါတျပုံရိုကျပွီး ဝငျငှမေရှာခငျ ဒီဂဈြတယျကငျမရာ တဈလုံးဝယျဖို့ လိုအပျလာပါပွီ။ ဒီလိုဝယျရမယျဆို လို့ ပိုကျဆံအမြားကွီးကုနျမယျလို့မထငျပါနဲ့။ အနညျးဆုံးမွနျမာငှေ လေးငါးသိနျးလောကျကနစေပွီး ဒီဂဈြတယျ ကငျမရာတှကေို ဝယျလို့ရနိုငျပါတယျ။ ဈေးကွီးကွီးကငျမရာအကောငျးစားကွီးနဲ့ရိုကျမှ ဓါတျပုံကောငျးကောငျးရ တာမဟုတျပါဘူး။ ဈေးအလယျအလတျကငျမရာနဲ့ရိုကျရငျလညျး ဓါတျပုံကောငျးကောငျးထှကျပါတယျ။ ကငျမရာ ထကျစာရငျ ဓါတျပုံပညာမှာ ရိုကျတဲ့သူကပိုပွီးတော့ အရေးကွီးတယျဆိုတာကို အမွဲသတိရပါ။
ဒီဂဈြတယျကငျမရာစဝယျမယျဆိုတာနဲ့ ကွုံရမှာက ဘယျလိုအမြိုးအစားဝယျမှာလဲ။ Bridge လား၊ DSLR လား၊ Mirrorless လားဆိုပွီးတော့ စပွီးတော့ စဉျးစားရပါမယျ။ ပွီးရငျဘယျတံဆိပျဝယျကိုငျသငျ့လဲဆိုတာ ထပျပွီး တော့ စဉျးပွီးတော့ စဉျးစားရပါမယျ။ မွနျမာနိုငျငံဈေးကှကျထဲမှာ Cannon, Nikon, Sony, Panasonic နဲ့ Fuji ဆိုတဲ့ တံဆိပျတှေ ရှိပါတယျ။ Cannon ကတော့ Toyota ကားလိုပဲ မွနျမာနိုငျငံမှာလူကွိုကျမြားတဲ့ အမှတျတံ ဆိပျပါ။
ဒီနရောမှာ ကငျမရာ Review လုပျမှာမဟုတျတဲ့အတှကျ ကငျမရာတှအေကွောငျးကို သီးသနျ့မပွောတော့ပါဘူး။ ဘယျလောကျဈေးနှုနျးသုံးမယျဆိုရငျ ဘယျလိုကငျမရာမြိုးတှဝေယျသငျ့လဲဆိုတာပဲ ပွောသှားပါမယျ။ အခုမှစပွီး ဒီဂဈြတယျကငျမရာနဲ့ ဓါတျပုံရိုကျခငျြတယျဆိုတဲ့သူတှအေတှကျ DSLR အမြိုးအစားကို ရှေးဝယျပါလို့အကွံပေး ပါတယျ။ Mirrorless တှကေ ပေါ့ပါးပမေယျ့ ဈေးနှုနျးမွငျ့မားပါတယျ။
DSLR အမြိုးအစားတှထေဲမှာဆိုရငျ Nikon D3300, D3400 ၊ Cannon 1300D တို့က လေးသိနျးခှဲ၊ ငါးသိနျးနဲ့ ရနိုငျပါတယျ။ Tocuch Screen နဲ့လိုခငျြတယျဆိုရငျတော့ ၇ သိနျးခှဲ၊ ၈ သိနျးလောကျသုံးရပါမယျ။ နောကျပွီး ကငျမရာဆိုတာက သူ့ခညျြးပဲမပွီးသေးပါဘူး။ မှနျဘီလူးဝယျဖို့ ကနျြပါသေးတယျ။ Sony တော့၊ Fuji တို့က လညျးကောငျးတယျဆိုပမေယျ့ သူတို့က ဈေးနညျးနညျးမြားမြားပါတယျ။ ကိုယျကပိုကျဆံသုံးနိုငျတဲ့သူတှဆေိုရငျ တော့ ဘာမှပွဿနာမရှိပါဘူး။ ကြှမျးကငျြတဲ့သူနဲ့သာတိုငျပငျပွီး ဈေးကွီးကွီးကငျမရာအကောငျးစားတဈလုံးသာ ဝယျလိုကျပါ။
ဒါကတော့ Digital ကငျမရာအကွောငျးကောငျးကောငျးမသိသေးတဲ့သူတှကေို နညျးနညျးမိတျဆကျပေးတာပါ။ ကငျမရာဝယျပွီးသှားပွီဆိုရငျတော့ ပိုကျဆံစရရှာလို့ရပါပွီ။
ကိုယျရိုကျထားတဲ့ဓါတျပုံတှကေို အှနျလိုငျးပျေါမှာရောငျးလို့ရပါတယျ။ နိုငျငံခွားမှာတော့ ဒိလိုမြိုး Websites တှေ အမြားကွီးပါ။ Shutterstock နဲ့ Alamy တို့ကတော့ အှနျလိုငျးမှာ ဓါတျပုံရောငျးဝယျနိုငျတဲ့ နာမညျကွီး Websites တှပေါ။ မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး ဒီလိုမြိုးဓါတျပုံရောငျးဝယျနိုငျတဲ့ Website တဈခုရှိပါတယျ။ အဲ့ဒါ ကတော့ Flairs Eyes ပါ။ သူရဲ့ Websites လိပျစာက www.flaireyes.com ဖွဈပါတယျ။
သူ့ဆီကို ဓါတျပုံပို့ပွီးရောငျးမယျဆိုရငျတော့ စညျးကမျးခကျြတခြို့ရှိပါတယျ။ အဲ့ဒါတှကေ
– ရိုကျကူးသူက အသကျ ၁၈ နှဈပွညျ့ပွီးဖွဈရပါမယျ။
– မွနျမာနိုငျငံအတှငျးမှာ ရိုကျကူးထားတဲ့ ဓါတျပုံတှသော ဖွဈရပါမယျ။
– DSLR (သို့) Mirrorless Camera နဲ့ ရိုကျကူးရပါမယျ။
– ဓါတျပုံအရှယျအစားက အလြား ၃,၀၀၀ x အနံ ၂,၀၀၀ Pixels (3,000 x 2,000 Pixels) အနညျးဆုံးရှိပါမယျ။
Resolutions အနနေဲ့ 300 (PPI) နဲ့ ဖိုငျဆိုကျက အနညျးဆုံး 1 MB မှ3MB အတှငျး ရှိရပါမယျ။
အသေးစိတျအခကျြအလကျတှေ သိခငျြတယျဆိုရငျ ဒီ Facebook Page မှာ အသေးစိတျဝငျကွညျ့လို့ရပါတယျ။
ဓါတျပုံတှရေောငျးဝယျနိုငျတဲ့ Websites တှအေကွောငျးကိုလညျး နောကျအပတျမှာ ရေးသားဖျောပွပေးပါဦးမယျ။
Infinity-O Display ပါဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်သစ် A8s ကို Samsung မိတ်ဆက်
by PhoneHayKo . 14 hours ago